नि: शुल्क Gimp अनलाइन सम्पादक
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > अनलाइन Gimp सम्पादक
नि: शुल्क Photoshop
यो अनलाइन Gimp सम्पादक एक उपकरण हो जुन शुरुआत र पेशेवर प्रयोगकर्ताहरूको लागि निःशुल्क हो फोटोशपको विकल्प। Gimp अनलाइन प्रयोग गर्नुहोस् RAW फाइलहरूसँग काम गर्न, तहहरू र तेस्रो-पक्ष प्रयोग गरेर जिम्प प्लगइनहरू। छाला सम्पादन गर्नुहोस्, पिम्पल्स हटाउनुहोस्, रातो, रातो आँखा दोष र अर्ध स्वचालित र color्ग ग्रेडिंग प्रदर्शन यो नि: शुल्क Gimp Online सम्पादक प्रयोग गरेर।
के GIMP Online सम्पादक जिम्पको पूर्ण संस्करण हो?
होईन, यो सम्पादक भर्खरका प्रयोगकर्ताहरूका लागि डिजाइन गरिएको छ जसले छिटो अर्ध स्वचालित फोटो सम्पादन गर्न र सामाजिक मिडियामा फोटोहरू प्रकाशित गर्न आवश्यक छ।
के म पेशेवर फोटो रीचिंग प्रदर्शन गर्न सक्छु?
तपाईं पिम्पल्सलाई कभर गर्न सक्नुहुन्छ, रातो आँखा हटाउन सक्नुहुन्छ, दाँत गोरा पार्नुहुन्छ वा अनुहारको आकार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईं एक लोकप्रिय म्यागजिन वा प्रिन्टि inमा प्रकाशनको लागि फोटो तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु आउटसोर्स फोटो संपादन फिक्सफोटोलाई।
के म यस जिम्प अनलाइन सम्पादकमा मेरो प्लगइनहरू आयात गर्न सक्छु?
हो, यो नि: शुल्क Gimp Online विकल्पले सबै तेस्रो-पक्ष प्लग-इनहरूलाई समर्थन गर्दछ जुन तपाईं भित्र देख्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जिम्प वा फोटोशप। यी व्यावसायिक समावेश छन् फोटोशप ब्रशेस, फोटोशप कार्यहरू, फोटोशप ओभरले र पनि फोटोशप बनावट.
म किन एक भन्दा बढि फोटो अपलोड गर्न सक्दिन?
यस जिम्प अनलाइन सम्पादक ब्याच संपादन को समर्थन गर्दैन। तपाईं फोटोहरू व्यक्तिगत रूपमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूलाई बिभिन्न विन्डोजमा सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो जिम्प डेस्कटप संस्करण.
Gimp Online - भिडियो ट्रिक्स